Abwaan Yuusuf-Shaacir iyo daahfurka maansada Dhakafaar
Abwaan Yuusuf-Shaacir iyo daahfurka maansada Dhakafaar 0 Saturday 13th May, 2017 in Aragtida Dadweynaha by Xarunta Dhexe Visits: 182
Abwaan Yuusuf-Shaacir iyo daahfurka maansada Dhakafaar Abwaan Yuusuf Cabdille Cismaan "Shaacir" ayaa xalay madal la isku arkay huteelka Safaari ee Hargeysa ku soo bandhigay maansadiisii ugu dambaysay oo la yidhaa "Dhakafaar".
Abwaanku wuxu maansadan kaga hadlayaa galdaloolooyinka dimuqraadiyadda iyo in uu aaminsan yahay in dimuqraadiyaddu ay tahay hannaan aan wadi karin Somaliland.
Waxa iyaguna madhasha hadalo ka jeediyey aqoonyahano door ah oo qaarkoodna ay dimuqraadiyadda ka soo horjeedeen qaarkoodna ay taageersanaayeen.
Nuqul ka mid ah maansada oo Abwaan Yuusuf uu soo gaadhsiiyey Bandhige ayaa u dhigan sidan:
Maanso cusub: Dhaka-Faar Yuusuf Cismaan Cabdulle "Shaacir"
Maansayahanka waxaa godla ama ka hadliya dareenka iyo duruufaha la soo darsa bulshada uu la noolyahay, mid siyaasadeed mid dhaqan -dhaqaale iyo guud ahaaba wacyiga xiligaa taagan. Marka laga yimaado dhacdooyinkaa guud ee maasadani ka faaloonayso waxaanay si gaar ah farta ugu fiiqaysaa ama ka hor jeeddaa aragtida ku baaqaysa dimuquraadiyadda iyo dhalan-rogga sooyaalka umadeed. Naflaha Ale dunida ku uumay ma jiro mid aan ismaamulin. Xataa xayawaanka waxaa tusaale la inoogu sheegay shinida iyo boqortooyadeeda.
Dagaalkii labaad ee adduunku markuu dhammaaday waxaa bilaamay loolan xooggan oo dhex maray quwadihii bariga iyo galbeedka waxaana kala hoggaaminayay midawgii soofiyaati oo bariga horbooyadya, halka galbeedkana uu budhtuur u ahaa Maraynkaku. Waxaan laysku haystay sidii loo kala jiidan lahaa bulshooyinka caalamka. Waxaana lagu kala baaqayay mabaadii'da shuuciyadda iyo dimuquraadiga. Soomaaliya xiliyadaa waxaa ka curtay kacaan cusub oo askari hoggaaminayso waxaanay si jar-iska-xoornimo ah u qaateen aragtidii shuuciyadda oo Ruushku gadhwadeen ka ahaa. In kasta oo maskax muruq iyo maalba la isugu geeyay nidaamkaasi ma galin bulshadii Soomaaliyeed, waxaanu sabab u ahaa burburka iyo barakaca ilaa maanta haysta.
Sideedaba dhismaha maamul waxaa lagu dul bineeyaa diinta iyo dhaqanka umaduhu ay aamisan yihiin. Biyodhaca u jeeddadaydu waa ma sii shaqayn karta dimuquraadiyadda maanta dhagaheena ka badatay ee reer galbeedku dhaqaalaha la daba socdo.
Nidaamkan dadka ka soo horjeedaa waxyaabaha ay ku diidan yihiin waxaa ka mida in uu soo saaro cid aan ku habboonayn in ay xil ummadeed qabato. Sidoo kale looma jili karo qaabka ay u rabaan qarbigu in loo dhaqan galiyo. Sidaa daraadeed waxay ila noqday gaadhi aan isbeer baadhkiisu dalka oolin balse Yurub iyo Maraykan laga soo waarido. Taas oo ina gayaysiisay maahmaahdii ahayd "Bil saddex gurigaagana way kaa kaxaysaa guri kalena kuma gaadhsiiso."
Sababahaas ayay maasadani uga hor jeeddaa dimuquraadiyada waxaanay ku baaqaysaa in loo noqdo diinta iyo dhaqanka lana waafajiyo nidaamka dawladeed ee casriga ah.
Rah baa dhalan dhoolka
Dhulkii qaban waayay
Wax dhuunta u qooya
Dharaar ka amaahday
Markuu dhahar doogay
Xareedna ku dhaashtay
Xusuusna ka dhaartay
Dharaar ha is waayin
Intaada bal dheeho
Dhashii badar diiday
Dhunkaal lagu hoobay
Dhamaan ka sinaatay
Dhafoor warku yaala
Anaan kaba dhawrsan
Calaw dhaka faarka
Markaan baqal dhaafshay
Dharkayn kiyo ciinka
Habeen dhax ka doortay
Haduu dhulku ooyo
Dhaliisha ku maaleh
Aqoonta ka dheego
Hankaaga ku dheewad
Wax sheegu dhibaayo
Hadaad ka dhabriirto
U dhoola cadayso
Jidkii dhahar qaado
Adaa dhami doono
Dhal haadiyo oonka
Miyaanu wax dhaafin
Abaar la dhuyaalay
Cirkoo dhalma daayey
Dhalaan kugu ooyey
Dhigaanka nin doontay
Dantiisa u dhoofay
Maxaa dhamac jiifta
Dhabeel nin jeclaaday
Haday dhudi diido
Dhexbaa la noqdaaye
Dhibbuu ku sitaaye
Qajeel iyo dhaaxa
Dhurdaan malab dayne
Arbaw dhitis kaagu
Xil waa dhalanteede
Maxaad ugu dhiiran
Dharaar lagu maagay
Wuxuu yidhi dheega
intuu dhidar joogo
Dhaliil ma mutaysan
Ilmuu ka dhigaaye
In aan u dhegtaago
Dhabaa dimuq daarka
U dhoola cadeeyo
Habeen dhuxul qaato
Dhuu baa la xidhaaye
inaan dhalan doorsho
Dhib laygu amaano
Waxaan i dhaqaynin
Dhulkayga la keeno
Dhabcaal kama yeelin
Maxaan ugu dhiiran
Dhibaada u raadsan
Dhoomaa tala dayda
Nimaan dhaxal joojin
Maxaan ugu dhiibi
Maxaan uba dhawr san
Dhar beena u qaadan
Run baa dhinac taala
Dharaar nin ka cawday
Habeen uma dhaamo
Xuquuq ma dhalaysa
Islaamka ma dhuuxin
Waxbaa la dhugtaaye
Aduunku dhac maaha
Abuurta ku dheehan
Nin dhuuni ku raadshay
Halkuu dhigay maaha
Awood nin ku dhaatay
Siduu dhahay maaha
Dhiskeeda nin ee gay
Aqoon ku dhawaaday
Yiqiinta ma dhaafo
Jidkeedu ma dheera
Horseed dhaba weeye
Dhashii Nabi Aadan
Hab loo dhigay weeye
Hanaan dhaqay weeye
Hadaan cidi dhaamin
Maxaad uga dhawrsan
Dhigbaa la aslaaye
Colaad iyo dhiilo
Hadaan dhib la sheegin
War dhiiflihi oo lin
Malaa laf ma dhuuxdid
Nin keygan la dhuubtay
Habeen dhalad miihi
Qur baa uma dhoofin
Hadaanan dhib sheegin
War dhiiflihi oolin
Dhankaan u aroorin
Libaax kuma dhuunto
Nin dhoohani eedye
Fircoon bal dhegayso
Send to your friend Related Maansadii Ramadaan dhamaataye:Waxaa tiriyey Abwaan Axmed Cali Aadan. June 22, 2017
[War Farxad Ah] Abwaan Muddo Badan Hargaysa Ku Xidhnaa Oo Xoriyadiisi Dib U Helay + Meelo Kala Duwan Oo Lagu Soo Xidhay June 21, 2017
Saddex dardaaran oo ku saabsan habeenka laylatul qadarka.W/Q:Abwaan Yusuf Roobleh Xirsi (Sandoon) June 20, 2017
Maansadii "Addoon'nimo".Waxa tiriyey Abwaan,Maxamed Shugri Jaamac June 05, 2017
Maanso cusub oo la magac baxday :BULSHOOY DHAQAN BEEL DHEH,waxa tiriyay Abwaankii wayna May 20, 2017